महिलामा हुने स्वास्थ्य समस्या... :: डा. आशा सिंह :: Setopati
डा. आशा सिंह वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ
महिला र पुरुषमा फरक प्रजनन अंग हुन्छ। यसले नै महिलालाई विशिष्ट बनाउँछ। कतिपय रोग यस्ता छन् जुन रोग पुरुषलाई लाग्छ तर महिलालाई लाग्दैन।
पाठेघर,युटर्स,ओभरी,जेनिटेलिया र यौनांग महिलाका यस्ता अंग हुन् जसको विकास पेटमा भएदेखि नै हुन्छ। यसैले महिलालाई लाग्ने रोगहरू पेटमा भ्रुण अवस्थाबाटै पनि लाग्न सक्छ। तर यो भनेको एकदमै कम हुने कुरा हो।
जब छोरी जन्मिन्छ त्यसपछि शरीरको विकासक्रममा केही असर देखिन सक्छ। ५ लाख महिलामा १ जनाको पाठेघरको विकास भएको हुँदैन। ५० हजारमा १ जनाको योनीकै विकास भएको हुँदैन। यो समस्या कुरा हो।
यो समस्या पनि समयमै पत्ता लाग्यो भने यसको उपचार सरल हुनसक्छ। एक्स एक्स क्रोमोजोमले महिला र एक्स वाइ क्रोमोजोमले पुरुष बन्छ। एक्स,एक्स क्रोमोजमको कारणले पनि रोग लाग्न सक्छन् तर यो अवस्था भनेको निकै कम हो। त्यसैले यसबारेमा धेरै चर्चा गरिरहन परेन।
महिनावारी भन्दा पहिला सामान्यत दुवैलाई लाग्ने रोगका प्रकृति एउटै हुन्छ। तर जब केटीको महिनावारी हुने समय आउँछ,त्यो बेलामा उसको मानसिक परिवर्तन हुन्छ,धेरै तनावपूर्ण अवस्था आउँछ।
१० देखि १८ वर्षको उमेरमा महिलामा धेरै समस्या आउन सक्छ। महिनावारीको समयमा धेरैलाई हुने समस्या भनेको रक्तश्राव बढी हुने र महिनावारी गडबढी हुने हो। यो कुराको जनचेतना निकै कम छ। यस्तो बेलामा दुईथरिका मान्छे भेटिन्छन्।
एकथरिले सानो कुरा भयो भने चिकित्सककहाँ आइहाल्ने अर्को धेरै ठूला-ठूला समस्या आउँदा पनि चिकित्सककहाँ नआउने।
अहिले ९ वर्षमै पनि महिनावारी हुन थालेको छ। योसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्। कसैको धेरै रगत जाने हुन्छ,जसले गर्दा रक्तअल्पता हुन्छ। यहीबेलामा बच्चाहरूले धेरै खाना नखाइदिने,स्कुलको समय नमिल्ने,आमाबाले दिएको खाना नखाइदिने र जंकफुड खाइदिने समस्या छ।
यो बेलामा खाना पर्याप्त नखाँदा रक्तअल्पता देखिने हुन्छ। यो यस्तो रोग हो,उसको हरेक क्षमतालाई ह्रास गर्छ। पढाइमा, खेलकुदमा पछाडि पर्छ। उसको ध्यान एकत्रित हुँदैन भने समग्र व्यक्तित्व विकासलाई असर गर्छ।
रोग त आफ्नो ठाउँमा छ तर मान्छेको विकास सामान्य तरिकाले भइदिँदैन।
अर्को कुरा बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ नपुगेर उनीहरूले प्याड समयमा परिवर्तन गरेका हुँदैनन्। हुनत दूरदराजमा प्याड राख्ने र फाल्ने पनि सुविधा छैन। अहिले यस्ता बैंकहरू खुल्दैछन् त्यो धेरै राम्रो हो।
बच्चाहरूले एउटै प्याड धेरै समय प्रयोग गरिराख्दा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। रक्तअल्पता र संक्रमण हुन्छ तर उनीहरूले रोग लुकाइरहेका हुन्छन्।
आमा बाबुले पनि ध्यान दिएका हुँदैनन्। समस्यालाई बेवास्ता गर्दा थप समस्या आइरहेको हुन्छ। यसले भोलिको दिनमा बच्चा नबस्ने समस्या समेत हुनसक्छ।
यो समस्या अहिले निकै बढिरहेको छ। पहिला १० प्रतिशतमा बाँझोपना हुन्छ भनिएको थियो तर अहिले यो बढेर धेरै भएको छ। यद्यपी यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन।
महिलालाई उमेर अनुसारको रोग बुढेसकालसम्म पनि लाग्छ। गर्भवती महिनावारीसँग सम्बन्धित रोगहरू छन्। यीमध्ये कतिपय रोग रोकथाम गर्न सकिने छन्। रोग समयमा पत्ता लगाइयो भने यसबाट ज्यान जान रोक्न सकिन्छ।
पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर
जब केटी मान्छेले शारीरिक सम्पर्क सुरू गर्छिन् एसपिभी भन्ने भाइरसले गर्दा क्यान्सर रोग लाग्ने खतरा पनि बढ्दै जान्छ। अहिले एसपिभीको भ्याक्सिन पनि छ। सरकारले निःशुल्क दिने भनेको छ तर हरेकको पहुँचमा पुगिसकेको छैन।
रोगबाट बच्नका लागि यो भ्यक्सिन लगाउनुपर्छ। पाठेघरको स्किन टेष्ट गर्दा पनि यो रोग पत्ता लाग्छ। सुरूमै उपचार भयो भने रोग निको हुन सक्छ जसले गर्दा पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलाको मृत्यु हुँदैन। नेपाल जस्ता देशहरूमा महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण यो रोग हो। विकसित मुलुकमा महिलाहरूलाई लाग्ने सबभन्दा खतरनाक रोग स्तन क्यान्सर हो।
स्तन क्यान्सरबाट बच्नका लागि महिला आफैंले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छिन्। स्तन छामेर त्यहाँ गिर्खा जस्तो भेटियो भने चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ। हामीकहाँ रोग नलागेसम्म चिकित्सककहाँ नजाने परम्परा नै छ। गयो भने केही रोग पो देखिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। तर बेलैमा पत्ता लाग्यो भने यसलाई रोक्न सकिन्छ भने चेतना अझै आएको छैन।
असुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगमा लापरबाही
महिलाको गर्भ हुन्छ,गर्भसँग सम्बन्धित विभिन्न जटिलताहरू छन्। त्यस्तै परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग नगरदिने ठूलो समस्या छ। असुरक्षित यौन सम्पर्कको कारणले असुरक्षित गर्भपतन रोकिएको छैन। कानुनले गर्भपतन मान्यता दिइसकेको भए पनि गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। औषधि पसलबाट सिधै गर्भपतका औषधि किनेर खाइदिने गरेका छन् जसले गर्दा कतिले ज्यान पनि गुमाउन परेको छ। अर्कोतिर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगर्ने समस्या आएको छ।
अन्य समस्या र यसका रोकथाम
महिनावारी सुक्ने समयमा पनि स्वास्थ्यमा असर देखिन्छ। पाठेघरमा ट्युमर पलाउनेदेखि लिएर ओभरीको क्यान्सर सबैबाट बच्ने उपाय भनेको नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनु हो।
त्यसबारेमा जनचेतना हुनुपर्छ। सबै सुविधा सहर केन्द्रित भएका छन्। फोहोर वातावरण,खाना र पानीले महिला पुरुष सबैलाई असर गरेको छ। तर पनि महिलाको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा कम छ।
स्वास्थ्य सेवा पनि महँगो छ। हरेक स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन छ। बिरामीको भीड अनुसारको चिकित्सक छैन। सुधार्नुपर्ने कुरा त हुन्छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन।
चिकित्सकहरूले पनि बिरामीलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। यसमा चिकित्सकको मात्रै दोष पनि छैन। किनकी एउटा चिकित्सकले बिरामी जाँच्न भ्याएको छैन भने उसले कसरी रोकथाम र जोगिनका लागि काउन्सिलिङ गर्न सक्छ?
यसलाई सम्बोधन गरेर जान सकियो भने महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्छ। महिला स्वस्थ भयो,सुखी भयो भने विकसित देशका लागि आधार तयार हुन्छ। यस्तो भएमा महिलाबाट जन्मिने छोरी होस् या छोरा होस् स्वस्थ हुने थियो ।
तीज,पञ्चमी,दसैं र तिहारमा महिलाले जति उत्साह देखाउँछन् त्यसरी नै आफ्नो लागि वर्षमा एक दिन निकाल्न जरूरी छ। रोग लागेपछि जान्छु भनेर नबसीकन स्वस्थ रहँदैमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। यसले नै तपाईंलाई स्वस्थ र बलियो बनाउँछ।
(वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा आशा सिंह प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत छिन्। उनी नेपाल प्रहरीकी प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १४, २०७६, ०१:३५:००
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा चौथो पटक कलेजो प्रत्यारोपण सफल
किन दुख्छ टाउको?